Divx Player ကြော်ငြာခြင်း — MYSTERY ZILLION
Divx Player ကြော်ငြာခြင်း
June 2008 edited June 2008 in File Request
ကျွန်တော်အခုရေးမဲ့အကြောင်းကတော့ DIVX Player လေးအကြောင်းပါ။ သိပြီးသား အကို၊ အမ များရှိခဲ့ရင်လည်းကြိုပြီး တောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျာ..ရေးတာထက် မေးချင်တာလည်းပါ ပါတယ်။ ဒီပလေယာကိုအသုံးပြုရင်တော့ DIVX format မှသုံးလို့ရပါတယ်။ အခြား FORMAT တွေလက် မခံ ပါဘူး။ သူရဲ့ SOFTWARE ကိုဖွင့်လိုက်ရင် CONVERTER ပါတစ်ခါတည်း ပါလာ ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ၊ သီချင်းတွေကိုအသံထွက်ကောင်းကောင်း၊ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့
ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ရထားတာက trail ဆိုတော့ တစ်ချို့ function ပိုင်းတွေအလုပ် မလုပ်ဘူး လို့ထင်ပါတယ်။Key ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ full vision ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည်မျှေ၀စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအနေအထားကလည်း အသုံးပြုရတာကောင်းပါတယ်။
အခုနကကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ သုံးရတဲ့ တစ်ပိုင်းပေါ့နော်.. နောက်တစ်ပိုင်းက S60 ဖုန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ အပိုင်းလေးပါ။ ဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီး အခွေတွေကြည့်ရင် full screen နဲ့ကြည့်ရပြီး၊ တော်တော်ကောင်းပါသည်။ ဒါပေမဲ့ သီချင်း VCD တွေမှာ တီးလုံးသံပါပြီး၊ သီဆိုသူ အသံပျောက်နေပါတယ်။ သီဆိုသူအသံထွက်အောင်၊ Total Converter နဲ့ ပြောင်းတဲ့အခါမှာ အသံပိုင်း ကို ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလေးများသိရင်ပြောပြပေးကြပါနော်
ဒါလေးက WINDOW မှာ သုံးတဲ့ SOFTWARE LINK လေးပါ။
ဒါက S60 ဖုန်းတွေမှာသုံးတဲ့ SOFTWARE LINK လေးပါ။
mgminnyo wrote: »
Pro for Windows isapackage that includes utilities, and documentation that you need to play DivX files, the DivX Pro Codec, DivX Player, DivX Web Player and the DivX Converter, providing all you need to create, play, manage and burn DivX videos.
The most advanced version of DivXГѓвЂљГ‚В® video compression technology, the DivX ProГѓВў„Г‚Вў codec includesasuite of powerful encoding tools enabling the highest levels of visual quality, compression and control. DivX Pro plugs into your video software to produce high-quality movies (at one-tenth the size ofaDVD) for viewing on your PC or, with DivXГѓвЂљГ‚В® Certified DVD players, right on your TV.
The DivX Converter will allow users to easily convert videos to DivX in one easy step. Simply drag videos onto the DivX Converter and click ГѓВў€˜convert.ГѓВў€™ Videos created with the DivX Converter will play back on millions of certified devices.
* User account management - ItГѓВў€™s now easy to activate and manage certified devices including DVD players, portable media players and more from within the DivX Player interface.
WhatГѓВў€™s new in the latest DivX Codec:
* Over 10% faster encoding in ГѓВў€œInsaneГѓВў€Г‚Вќ mode
* Up to 7% better compression for HD capture in ГѓВў€œFastestГѓВў€Г‚Вќ mode
fullversion ပါ။keygen file ပါပါတယ်။
အခုလိုပြန်လည်မျှေ၀ပေးတာ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...:77::77: